Philips Electric Shaver Wet & Dry AT620/14 ~ ICT.com.mm
HomePhilips Electric Shaver Wet & Dry AT620/14
Philips Electric Shaver Wet & Dry AT620/14
Now you can enjoyarefreshing shave without worrying about damaging your skin. Use AquaTouch with shaving gel or foam for enhanced skin comfort. Aquatec seal ensuresasafe, refreshing wet shave.... [Learn more]
Brand: PHILIPSSKU: 71259N/ASee more: New Arrivals, Philips, Philips Promo, Products, Shop, Today's Deals, Under 100kFilter by: Philips Promo, Promotion
Philips Electric Shaver Wet & Dry မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်ကို အသုံးပြုပြီးတော့ သင့်ရဲ့အရေပြားကိုလုံးဝမထိခိုက်စေဘဲ အလွယ်တကူ မုတ်ဆိတ်ရိတ်နိုင်ပါပြီ။ မုတ်ဆိတ်ရိတ် Gel သို့မဟုတ် Foam ကိုအသုံးပြုပြီး AquaTouch Mode နဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Aquatec Seal တွေက 100% ရေစိုဒဏ်ခံနိုင်တာကြောင့် ရေချိုးခန်းထဲမှာ နှစ်သက်ရာ မုတ်ဆိတ်ရိတ် Gel/Foam နဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုပြီး ဘေးကင်းသန့်စင်တဲ့ ရေစိုမုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အချိန်မရတဲ့အတွက် အရေးပေါ် ခပ်မြန်မြန် မုတ်ဆိတ်ရိတ်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းခြောက်သွေ့တဲ့အနေအထားအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ပြီးချိန်မှာ စက်ရဲ့ခေါင်းကိုဖွင့်ပြီး ရေပိုက်ခေါင်းအောက်မှာ ထားလိုက်ရုံနဲ့ သင့်ရဲ့မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်ကို အလွယ်တကူသန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓားသွားအတွက် နှစ်နှစ်တိတိ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ CloseCutSystem ဘလိတ်ဓားသွားတွေကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဓားသွားတွေရဲ့အပေါ်မှာလုံးဝန်းတဲ့အနားစောင်းတွေ တပ်ဆင်ထားတာကြောင့် သင့်ရဲ့အရေပြားပေါ်မှာ ချောမွတ်စွာလျှောတိုက် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက်ကြောင့် သင့်ရဲ့မုတ်ဆိတ်တွေကိုသက်တောင့်သက်သာနဲ့ အနီးကပ်ဆုံး/အတိုဆုံး ရိတ်ဖြတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်ရဲ့ လက်ကိုင်ကို ချော်ထွက်မှုမရှိအောင် Anti-slip coating အလွှာနဲ့ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် သင့်ရဲ့လက်ထဲမှာ မြဲမြံစွာ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးမုတ်ဆိတ်ရိတ်နေစဉ်မှာ မိမိရိတ်လိုသမျှနေရာတွေကို တိတိကျကျ ရိတ်ပယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။အားပြန်သွင်းနိုင်တဲ့ ဘတ္ထရီပါဝင်ပြီး အားတစ်ခါသွင်းထားရုံနဲ့ ဆယ်ကြိမ်အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။LED အချက်ပြမီးပါဝင်ပြီး ဘတ္ထရီအားနည်းနေချိန်နဲ့ အားသွင်းနေချိန်တွေမှာ အချက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အာမခံသက်တမ်း နှစ်နှစ်အထိ ပေးထားတဲ့အတွက် စိတ်ချလက်ချနဲ့ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်မဲ့ မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်ဖြစ်ပါတယ်။
Total price:K150,900 K118,200
This item: Philips Electric Shaver Wet & Dry AT620/14 K93,900 K75,000